Labada madaxweyne ayaa ayaa ku heshiiyay dib u billaabidda wadahadalladi ganacsi ee labada waddan, xilli uu halki ugu sarreeyay gaaray dagaalka dhinaca ganacsiga ah ee u dhaxeeyay Washington iyo Beijing.
Hase yeeshee, madaxweyne Trump ayaa sheegay inuusan ka qaadi doonin tacriiftii uu horay u saaray wax soo saarka Shiinaga, balse uu hakiyay inuu soo saaro canshuur cusub.
Shir jaraa’id oo madaxweyne Trump qabtay inti lagu guda jiray gaba gabadi Shir-madaxeedka dalalka G-20 ee maanta lagu soo xiray dalka Japan, ayuu madaxweyne Trump sheegay, in uu shirkadaha Mareykanka u ogolaan doono in ay ganacsi la sameystaan shirkadda Isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei (Waay-Waay).
Hey’adaha amaanka Mareykanka ayaa dhawaan ka digay in software-rada shirkadda Way-Way ay khatar ku yihiin ammaanka Mareykanka.
Madaxweynaha Shiinaha ayaa isna dhankiisa sheegay in Mareykanka iyo Shiinaha ay ay ka faa’iidi doonaan iskaashiga sidaasi daraadeedna uu iska hor-imaadka ka wanaagsanyahay wadahadal iyo wax wadaqabsi.